Bespoke Synth, rindrambaiko maodely open source modely synthesizer | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 14/09/2021 23:59 | Nohavaozina amin'ny 15/10/2021 03:14 | fampiharana
Rehefa afaka 10 taona fampandrosoana dia nanjary fantatra Ny famoahana ny ny kinova voalohany an'ny tetikasa Bespoke Synth, mivelatra toy ny synthesizer feo rindrambaiko modular izay mamela hamokatra sy handamina feo mifototra amin'ny fanodinana maso ny onjan'ny feo eo amin'ireo modules samihafa izay mamorona sy manova ny endrika onjan'ny feo, ary koa ny effets superposition.
Bespoke Synth no ati-dohan'ilay mpamorona Ryan Challinor. Nofaritan'i Ryan ho toy ny "mamotipotika an'i Ableton Live miaraka amin'ny baseball" ary avy eo mangataka azy hamerina azy io, miampy ny manamarika fa Bespoke Synth dia tsy DAW mahazatra tsisy fika. Kanvas tsy misy fotony io amin'ny ankapobeny, mamela anao hamorona sahan'asa namboarina manokana.
Avy amin'ny toetran'ny fampiharana, ny mety hanovana ny tontolo iainana amin'ny sidina dia voamarika: afaka manampy sy manova node ianao nefa tsy manelingelina ny famerenana mozika.
Bespoke dia tetikasa iray natomboko tamin'ny taona 2011 ho fomba iray hianarana bebe kokoa momba ny fanaovana mozika. Raha tokony handany fotoana hianarana ny sanganasan'ny DAW efa misy aho dia nanao fampihetseham-po tsy tamim-pitandremana mba hanandrana sy hanangana ny ahy manokana. Ny rindrambaiko dia namboariko ho ahy sy ho ahy, ka izany no nahatonga ilay anarana hoe "Bespoke".
Ny famolavolana ny fototr'i Bespoke dia ny fizarana ny zava-drehetra ho maodely misaraka izay azo atambatra amin'ny endrika manokana, toy ny fitaovana maoderina. Bespoke dia natao ho azo namboarina tanteraka, miaraka amin'ny hevitra fa ny endrika manokana noforoninao dia hatao "bespoke" ho anao koa.
Ankoatr'izay misy mihoatra ny 190 ny modules azo ampiasaina amin'ny famoronana rojo vy. Manohana ny fifandraisana amin'ireo plugins VST ivelan'ny boaty sy ny famoronana haingana ireo mpamily Python anao manokana. Omena fitaovana ho fampidirana amin'ireo mpanara-maso MIDI.
Ryan no namolavola izany ho an'ny tenany sy ny onjam-peony, fa atokisany ho an'iza na iza Iza no te hanandrana ny banga tsy misy ao amin'ny Bespoke Synth. Mety ho somary mavesatra ihany satria kely dia kely ny zavatra tokony hotohizanao rehefa mihazakazaka ny rindrambaiko ianao.
Tsy maintsy manomboka mitrandraka sy manandrana ianao. Misy tetikasa santionany roa azonao ampakarina, saingy tsy dia ilazany anao firy. Ary koa, ny banga fananganana rehetra dia tsy misy na farafaharatsiny tsy amin'ny fomba mahazatra. Mandritra ny antsasak'adiny fotsiny aho no manandrana mitady sivana mba hahitako fa ao anatin'ny oscillator ilay izy, noho izany tsy voatery hanaraka ny lalàna antenainao.
Na izany aza dia toa adala sy habaka be izy io. Tiako ny fomba velomain'ireo tariby patch ho an'ireo famantarana mivoaka ao aminy. Sady mampitolagaga no manaitaitra ary feno karazan-pototra rehetra raha azonao ilay izy. Ny filanao tsara indrindra dia ny mijery ny horonantsary Benn Jordan etsy ambany!
Bespoke Synth dia loharano misokatra ary maimaim-poana tanteraka raha te hampiasa azy ianao, na dia mamporisika anao handoa dolara vitsivitsy aza ny tranokala mba hanampiana amin'ny vidiny, saingy mitovy ihany ilay kinova na ahoana na ahoana. Tena tokony hanandrana ianao.
Mahaliana ny fomba fiasan'ny tetikasa amin'ny fanangonam-bola: ankoatry ny kinova maimaimpoana, safidy roa no omena: miampy ampiarahina ($ 5) ary pro voafaritra ($ 15), izay mitovy tanteraka amin'ilay kinova maimaimpoana ary tsy misy fiasa mandroso izay aseho mazava ao amin'ny latabatra fampitahana eo amin'ilay tranonkala (midika izany fa raha tiany ilay programa dia afaka manohana ilay tetikasa ny mpampiasa raha tsy misy fanerena amin'ny fividianana kinova aloa).
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny tetikasa, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao amin'ity rohy 1 ity.
Raha ny momba ny fanangonana Bespoke Synth, mora be izany, satria ampy ny manokatra terminal ary manoratra ity baiko manaraka ity:
Ny kaodin'ny tetikasa dia voasoratra ao amin'ny C ++ ary zaraina eo ambanin'ny lisansa GPLv3. Vonona ny fivoriambe vonona ho an'ny Linux, macOS, ary Windows.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Bespoke Synth, rindrambaiko maodely malalaka synthesizer feo rindrambaiko